Ngathi-I-HEBEI FCE INKQUBO YOKHUSELEKO EYODWA NEENKONZO ZENKQUBO
I-HEBEI FCE INKQUBO YOKHUSELEKO EYODWA NENKAMPANI YOKUFUNDAyasekwa ngo-2009 ogama Hebei FCE Intertrade Corporation. Ngo-2014, satshintshela kwigama langoku. Iofisi yethu ibekwe kwiSithili saseChang'an, kwiSixeko saseShijiazhuang, kwiPhondo lase-Hebei, e-China.
Sigxila kwimveliso kunye nokuthengiswa kweeyunifomu ezizodwa zokukhusela, iyunifomu eqhelekileyo yokhuselo neyunifomu yangaphandle. Imveliso yethu ibandakanya iibhatyi, izikipa, iibhulukhwe, iihempe, iminqwazi kunye nezinye iimveliso ezinxulumene nazo.
Inkampani yethu ibandakanya uyilo, uphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa, inkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa kunye nezinye izikhundla zobungcali kwimpahla ekhethekileyo yokukhusela. Inkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho kunye nenkqubo yokuvelisa inokunika abathengi uluhlu olupheleleyo lweenkonzo ezilungiselelwe wena.
Nge-QMS egqibeleleyo kunye nendlela yokusebenza enxulumene nokhuseleko, u-Hebei FCE yinkampani eqinisekisiweyo ene-LA yesiqinisekiso esikhethekileyo semfundo yokukhuselwa evunyiweyo nguRhulumente kuLawulo loKhuseleko loMsebenzi. Ngeli xesha, inkampani yethu ifumene izatifikethi ezahlukeneyo, ezinje nge-ISO 9001, i-ISO 14001, i-OHSAS 18001 njl.
Iimveliso ezikumgangatho ophezulu, iqela lokusebenza okuphezulu kunye nomgangatho ophezulu, u-Hebei FCE uphumelela ukuqaphela kunye nokuthembela kwabathengi kule minyaka idlulileyo.
Sityunjwe njengomthengisi ofanayo weNkampani yeoyile ye-SHELL, iNkampani yeoyile YONKE, iNkampani yeBritish Petroleum, iMaybank kunye neCRCC njl
Ngokusekwe kwinjongo yokuba "ukuba ngumgangatho wokubekwa kwamashishini kushishino olwenziwe ngokwezifiso iyunifomu esebenzayo e-China" kunye nokuthunywa "Senza ubuhle begama lophawu", u-Hebei FCE uzama ukubonelela ngemveliso engcono kunye nenkonzo kubathengi behlabathi abanomgangatho ophezulu phezulu Isantya ngokusebenzisa ukuphucuka okuqhubekayo kokufezekiswa kweentonga, ukungenisa izixhobo zobungcali, ukwenziwa kwenkqubo yemveliso, ukusebenza ngokulinganayo kunye nokujonga ngokungqongqo kwinkcukacha nganye.
Inkampani yethu iimveliso ezikumgangatho ophezulu, inkonzo elungileyo kunye namaxabiso kukhuphiswano, abathengi ukuseka igama elihle, ngokunyanisekileyo ukwamkela ekhaya nakumazwe aphesheya ukuxoxa ngentsebenziswano.
Sinethemba lokuseka ubudlelwane bexesha elide nabathengi abanegama elihle ekhaya nakwamanye amazwe, ukuxhamla kunye nentsebenziswano, kunye nophuhliso oluqhelekileyo.